इटहरीको मायाघरका ३६ जनामा कोरोना पुष्टि- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
इटहरीको मायाघरका ३६ जनामा कोरोना पुष्टि
सुनसरी — इटहरीस्थित मायाघरमा आश्रित ३६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा मायाघरमा आश्रय लिइरहेका ८५ जनामध्ये ३६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
इटहरी अस्पतालको इमर्जेन्सी विभाग प्रमुख तथा कोभिड–१९ होमआइसोलेन सपोर्ट टिम संयोजक रामकुमार धमलाका अनुसार ३६ संक्रमित मध्ये २८ जनामा सुख्खा खोकी, ज्वरो, वान्ता हुने, खान मन नलाग्ने जस्ता कोभिड–१९ का लक्षण देखिएको छ ।
कोरोना संक्रमित देखिएपनि हालसम्म उनीहरुको अवस्था भने सामान्य रहेको छ । उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमका अनुसार संक्रमितहरुलाई उपचारमा सहयोग पुग्ने पल्स अक्सिमिटर, माक्सलगायत स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गरिएको छ । उनका अनुसार सबै संक्रमितलाई इटहरी अस्पतालले स्वास्थ्य निगरानी गरिरहेको छ ।
मायाघरकी सञ्चालक समितिकी सचिव सुभद्रा प्याकुरेलले भनिन्, ‘कोरोनाको लक्षण देखिएपछि एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो । तीमध्ये ३ वर्षीया बालिकादेखि ६० वर्षीया महिलामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भयो । मायाघरलाई नै क्वारेन्टिन बनाएर राखेका छौं । संक्रमित नभएकाहरुलाई छुट्टै कोठामा राखेका छौं ।’
निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि मायाघरमा पनि मानिसको आवतजावत बढेपछि कोरोना संक्रमण भएको हुनसक्ने उनले बताइन् । उनका अनुुसार इटहरी उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा, इटहरी अस्पताल र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का प्रतिनिधिले मायाघरको निरीक्षण गरेर जनस्वास्थ्य अवस्था मूल्यांकनसमेत गरेका छन् । कोरोना संक्रमणकै कारण मायाघरमा नयाँ व्यक्तिहरुलाई ल्याउन भने केही समय बन्द गरिएको उनले बताइन् ।
मायाघरले विभिन्न कारणले घरबाट निकालिएका, आमाबाबुविहीन, बेवारिसे, मानसिक सन्तुलत ठीक नभएका महिला र बालबालिकाहरुलाई उद्धार गरेर आश्रय दिँदै आइरहेको छ ।
प्रकाशित : असार २७, २०७८ १४:५४
रेडबुक संशोधन गरी समानुपातिक बजेटको माग
असार २७, २०७८ सन्तोष सिंह
धनुषा — प्रदेश २ सरकारले रेडबुकमा मन्त्रीमुखी योजना मात्रै राखेको भन्दै विपक्षी दलले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । रेडबुक संशोधन गरी समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन नभएसम्म प्रदेशसभा चल्न नदिने एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले अडान राखेपछि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भएको छ ।
आइतबार प्रदेशसभा बैठक सुरु हुनासाथ एमाले र मोओवादी केन्द्रका सांसदहरुले उभिएर बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् । नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले बजेट सन्तुलित नभएको आरोप लगाए । ‘बजेट कुन ध्येयबाट आएको छ । प्रदेश सरकारको बजेट जिल्ला विकास समितिकोभन्दा पनि तल्लो स्तरको छ । बजेट प्रदेशको नभएर एउटा नगरपालिका र एक निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित छ ', उनले भने, ‘जनताको अधिकारमाथि कुठाराघात भएको छ । बजेटले प्रदेशको विकास सम्भव छैन ।’ प्रदेश सरकारले प्रकाशित गरेको पुस्तक रेडबुक नभएर ब्ल्याकबुक भएको टिप्पणी गरे । बजेट सुधार नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने उनले चेतावनी दिएका छन् ।
प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद दिलिप साहले प्रदेश सरकारको बजेट विकासका लागि नभएर स्वार्थ पूरा गर्न ल्याएको आरोप लगाए । ‘प्रदेश सरकारको रेडबुक मन्त्रीले आफ्ना योजनाहरुले मात्रै भरेका छन्,’ सांसद साहले भने, ‘मन्त्रीको मात्रै योजना राखिएको यो कालो बुक हो । अबण्डा किन ? भ्रष्टाचार गर्न हो ? भ्रष्टाचारको साक्षी हामी बस्दैनौं । मन्त्रीले मनपरी ढंगले आफनो क्षेत्रमा बजेट मात्रै खन्याउने अधिकार कस्ले दियो ?’ अर्थमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्ने शीर्षकहरुमा मात्रै बजेट आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा राखेको आरोप लगाए । समानुपातिक र सन्तुलित ढंगले ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश उनले माग गरेका छन् । मन्त्री केन्द्रित बजेट मान्य नहुने बताउँदै समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन नभएसम्म प्रदेशसभा चल्न नदिने उनले बताए ।
विपक्षी दलका सांसद उभिएर प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने अडान लिएपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले बैठक एक घण्टाका लागि स्थगित गरेका छन् । आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
प्रकाशित : असार २७, २०७८ १४:४२